Nitondra ny teny fampiononana sy nanolotra izay voatsirambin'ny tanana ho an'ny fianakaviana niharam-boina ny Fitondram-panjakana | Primature
Nitondra ny teny fampiononana sy nanolotra izay voatsirambin’ny tanana ho an’ny fianakaviana niharam-boina ny Fitondram-panjakana
Manoloana ny fianjeran’ny vatobe teny Ampamarinana ny alin’ny 17 febroary 2018, izay namoizana ain’olona 7 sy nahitana olona 8 naratra ; dia tonga nitondra ny teny fampiononana sy fankaherezana ary nanolotra izay voatsirambin’ny tanana ho an’ireo fianakaviana niharam-boina ny solontenan’ny Filoham-pirenena mivady izay notarihin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier, izay notronin’ny Minisitra eo ambany Fiadidian’ny Repoblika misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana, Benjamina Ramanantsoa; ny Minisitry ny raharaham-bahiny Henry Rabary-Njaka; ny Minisitry ny filaminana anatiny Mamy Jean-Jacques Andrianisa; ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jeneraly Randriamahavalisoa Girard sy ny Talen’ny kabinetra eo anivon’ ny Fiadidiana ny Repoblika, Eric Randrasana, ny marainan’ny alahady 18 febroary 2018.
Nanambara ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier fa « mandray andraikitra ny fitondram-panjakana ary hisy fanapahan-kevitra hentitra ho raisina. Hita fa tsy hijanona eo io vato io ka tsy maintsy hisy fanapahan-kevitra ho raisina miaraka amin’ny minisitra eo ambany Fiadidian’ny Repoblika misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra. »
Nanao antso avo ho an’ny mponina eny an-toerana ny Praiminisitra mba hanaraka ny fandaminana hapetraky ny fitondram-panjakana : « miantso ireo mponina eto an-toerana izay manana trano mba hanaiky ny fandaminana satria mety hiafara amin’ny fandaozana ny toerana fonenana ». « Hisy fomba ho jerena izay hametrahana vonjimaika ireo olona ireo na koa hametrahana azy ireo amin’ny tany izay toerana vaovao izay hiorenana. Ao anatin’ny fotoana fohy no andraisan’ny fitondram-panjakana izay fepetra izay ho an’ny olona manodidina ity toerana ity mba ahafahana misoroka ny loza » hoy hatrany ny Lehiben’ny Governemanta.
Marihina etoana fa hiantoka ny lany rehetra, ny fitsaboana ireo naratra, ny fikarakarana sy ny fandevenana ireo namoy ny ainy ny Filoham-pirenena mivady sy ny Fitondram-panjakana.
← Conseil du Gouvernement du Jeudi 15 Février 2018
Conseil du Gouvernement du Mardi 20 Février 2018 →